१५०औै जयन्तीमा महान लेनिनको स्मरण – Sthaniya Patra
१५०औै जयन्तीमा महान लेनिनको स्मरण
By स्थानीय पत्र	 Last updated Apr 25, 2020
केन्द्रीय सदस्य ने.क.पा. ( क्रान्तिकारी माओबादी)
बिश्वसर्बहारा बर्गका महान नेता क.लेनिनको जन्म आजकै दिन २२अप्रिल १८७०मा पिता इल्यानिकोलाएभिन्य उल्यानोभ र आम मारिया अलेक्सान्द्रभ्नाको कोख बाट रुषको भोल्गा नदीको किनारामा रहेको सिम्बिस्रक शहरमा भएको थियो । उहाँ एक मध्यम बर्गीय परिवारमा जन्मिनु भएको हो । लेनिनका पिता एक प्रगतिशिल विचार राख्ने, रुसी जनसाधारणका बीचमा शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्ने , स्कुल खोल्ने र भोल्गा तटबर्ती क्षृत्रमा बस्ने गैर रुसबासी जनजातिहरुको शिक्षा दीक्षाका लागि एक्दमै महत्वपुर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । आमा मारिया अलेक्सान्द्रभ्ना एक डाक्टर कि छोरी घरमै शिक्षा दीक्षा पाएकी थुप्रै बिदेशी भाषाकी ज्ञाता, साहित्य र संगीत प्रति सौखिन सरल स्वाभावकी नारी हुनुहुन्थ्यो । लेनिनको बच्चा हुदाको नाम भ्यालादीमिर ईल्लिच उल्यानोभ थियो ।
लेनिन सानै उमेर देखि नै साहसी र बहु प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो । उहाले पाच वर्षको उमेर देखि नै लेख पढ गर्न सिके पनि नौ वर्षको उमेरमा सिम्ब्रिसक जिम्नेसीएमको पहिलो दर्जामा भर्ना हुनु भयो । असाधारण प्रतिभाका धनी लेनिन कलामा सधै प्रथम हुनु हुन्थ्यो .। उहाँले आफ्नो जेठा दाजुको सहयोग र कठिन परिश्रम र मेहनतका कारण उच्च शिक्षा सम्म हासिल गर्नु भयो । लेनिनले सानै उमेरमा थुप्रै पुस्तकहरुको अध्यन गर्नु भयो । जस मध्य रुसी महान वैज्ञानिक र जारशाही तथा भुदास प्रथाका कडा विरोधी नेर्निसेभ्स्कीको के गर्ने ? भन्ने नामको उपन्यासले उहालाई निकै प्रभावित पारेको थियो ।
लेनिन युवा अवस्थामा पुग्दा रुषमा पुँजीवादी शोषणका साथै सामन्ती उत्पीडन कायम थियो । जसले शहरिया मजदुर र गाउले किसानको अवस्था दयनिय तुल्याएको थियो । जारशाहीको अत्याचार दमन र पुँजीपतिहरुको दमनकारण मजदुर किसानहरुको खस्किदो अनि दैनिय अवस्थाले लेनिनको मनमा शोषकहरु प्रति घृणा र शोषितहरु प्रति सहानुभूति पैदा गरेको थियो । लेनिनको परिवार नै क्रान्तिकारी थियो । लेनिनका दाजु अलेक्जेन्डर पिटर्सवर्ग बिश्वविधालयको विधार्थी हुदा नै जारशाही विरुद्धको संघर्षमा सक्रिय सहभागी हुन्थे र राजनीतिमा लेनिन आफ्ना दाजुबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो ।
१८८६ मा लेनिनका पिताको आकष्मिक निधन भयो भने उहाँका दाजु अलेक्जेन्डरलाई तत्कालीन रुसी जारशाही शासक अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा १८८७ को मार्चमा गिरफ्तार गरी त्यसै बर्षको मे महिनामा जारशाही शासक बर्गले फाँसी दियो । जुन घटनाले लेनिनलाई ठुलो चोट पर्यो र उहाले आफ्नो सम्पुर्ण जीबन क्रान्तिकारी संघर्षमा लगाउने दृढ संकल्प गर्नु भयो । लेनिनले क्रान्तिकारी कामको लागि आफुलाई सम्पुर्ण रुपमा तयार गर्दै सामाजिक विज्ञानको गम्भीर अध्ययन गरी स्वर्ण पदक सहित जिम्नेसीएमको आफ्नो अध्ययन सके पश्चात १८८७अगस्टमा काजान बिश्वबिध्यालयको कानुन विभागमा भर्ना हुनु भयो । जारशाही विरुद्धको क्रान्तिकारी संघर्षमा होमिएको कारण त्यसै बर्षको डिसेम्बरमा बिश्वविधालयबाट निष्कासित हुनुका साथै गिरफ्तार भैइ उहाँ काजान गुर्बेणीयाको कोकूसकिनो गाउमा एक वर्षका लागि निर्वासनमा पठाइयो । निर्वासन अवधिभर उहाँ बिहान उठे देखी बेलुका नसुत्दा सम्म निकै मेहनत गरी अध्ययन गर्नु हुन्थ्यो ।
लेलिनलाई जारशाही सरकारले निर्वासित अवधिमा पनि कडा निगरानी राख्न सुरु गर्यो । निर्वासित काजान बसाइकै क्रममा उहाँ रुषि क्रान्तिकारी नि।ए।फेदोसेएफले गठन गरेको समुहको सदस्य बन्नु भयो । नि.ए.फेदोसेएफ रुसका प्रथम मार्क्सवादी थिए । लेनिनले उनीबाट प्रभावित भइ लेनिनले पनि मार्क्सवादको गहिरो अध्ययन सुरु गर्नु भयो । लेनिनले मार्क्सको प्रमुख कृति पुँजीको अध्ययन एक्दमै गहन रुपमा गर्नु भयो र मार्क्सवादको अध्ययनबाट सर्बहारा श्रमिक बर्गलाई पुँजीपति वर्गको शोषणको जाँतोबाट मुक्ति दिलाउन पुँजीवादी राज्यसत्ता ध्वंस गरी समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु पर्ने कुरा सिक्नु भयो ।
मे १८८९ मा लेनिन आफ्नो परिवार सहित काजानबाट समरा गुर्बेनिया आउनु भयो । सामरा बसाईको क्रममा मार्क्स एंगेल्सका कृतिहरु कठोर अध्ययन गर्नुका साथै ल्याटिन अमेरिका, जर्मन, फ्रेन्च र अंग्रजी भाषाको गम्भीर अध्ययन गर्नु भयो । यसै समयमा कम्युनिष्ट घोषणा पत्रलाई जर्मन भाषामा अनुवाद गर्नुभयो र चार बर्ष घरमै बसेर बिश्वविधालयको अध्ययन पुरा गर्नु भयो । १८९१ मा पिटर्सबर्ग बिश्वबिधालयको कानुन विभागको प्राइभेट जाँच दिएर प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण भइ वक्कील हुनु भयो १ यसै क्रममा १८९२ बाट सामराको जिल्ला अदालतमा वकालत सुरु गर्नु भयो १ त्यहाँ लेनिनले गरीब किसान मजदुरको पक्षमा वकालत गर्नु हुन्थ्यो । लेनिनले १८९२ मा सामरामा पहिलो मार्क्सवादी अध्यन मण्डल खोल्नु भयो । १८९५ मा लेनिनले पिटर्सबर्गका मार्क्सवादी अध्यन मण्डललाई एउटै राजनीतिक संस्थाको रुपमा संगठित गर्नु भयो पछी त्यसलाई मजदुर वर्गको मुक्ति संघर्ष संघ नाम दियो । १८९६ मा त्यस संघले पिटर्सबर्गका कारखानाका मजदुरहरुको हड्तालको नेतृत्व गर्यो उक्त हड्तालमा ३० हजार भन्दा बढी मजदुरहरुले भाग लिएका थिय.ए । मजदुर आन्दोलनका कारण भयभित भएको जारशाही सरकारले १८९५ को डिसेम्बरमा लेनिन सहित संघका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्यो र लेनिनले पिटर्सबर्गको जेलमा चौध महिना एकान्त कोठामा कठोर जीबन बिताउनु पर्यो । उक्त जेलमै उहाले मार्क्सवादी पार्टीको पहिलो कार्यक्रम मस्यौदा तयार पारी यस कार्यक्रमको व्याख्या समेत गर्नु भयो । जेलमै हुदा नै पुँजीवादको विकास नामक पुस्तक लेख्न सुरु गर्नु भएको थियो ।
लेनिनका क्रान्तिकारी गतिविधिबाट त्रसित जारशाही सरकारले लेनिनलाइ १८९७ फेब्रवरी १३ मा पूर्बी साइबेरियामा गइ बसोबास गर्ने गरी ३ बर्षका लागि निर्वासन सजाय दियो । साइबेरिया निर्वासनको एक बर्ष पछि रुसी क्रान्तिकारी आन्दोलनकी नेतृ क्रूप्सकाया सँग भेट् हुनपुग्यो । यस अघि नै संघर्षका क्रममा चितपरिचित भैई प्रेम सम्बन्ध समेत रहेको थियो । उहाँहरुले साइबेरिया बसाईकै क्रममा बिबाह समेत गर्नु भयो । निर्वासनमै १८९९ मा मिन्स्क शहरमा रुसमा पुँजीवादको विकास नामक पुस्तक पुरा गर्नु भयो । लेनिनले निर्वासनमै रहेका बेला मार्च १८९८मा मिन्स्क शहरमा रसियाली सामाजिक जनबादी मजदुर पार्टीको महाधिवेशन गरी पार्टी स्थापना गरिएको घोषणा गरियो । निर्वासनबाट फर्किए पछी १९००मा पार्टी निर्माणका लागि पिटर्सवर्गको गोप्य भ्रमण गर्ने क्रममा गिरफ्तार पर्नु भयो र खानतलासीको क्रममा के ही नभेट्टिए पछी छुटकारा पाउनु भयो । जारशाही सरकारले लेनिनलाइ निकै ठुलो शत्रु सम्झी निगरानी गरी रहेको थियो । त्यसैले देश भित्र बस्ने अवस्था नभए पछी १६ जुलाई १९०० मा लेनिन जर्मनी तर्फ लाग्नु भयो । त्यही अवधिमा लेनिनले अखिल रशियाली क्रान्तिकारी पत्रिका इस्क्रा (फिलिङगो)को प्रकाशन प्रारम्भ गर्नू भयो । १९०१ देखीु इस्क्राु ु पत्रिकामा लेनिनका नामबाट रचना पठाउन थाल्नु भयो। १९०२मा ु के गर्नेु ? भन्ने कृति प्रकाशित भयो । जसमा सर्बहारा मार्क्सवादी पार्टी निर्माण सम्बन्धी बिस्तृत योजना प्रस्तुत गर्नू भएको थियो । पछी किसानहरुलाइ पार्टी कार्यक्रम बुझाउने उदेश्यले १९०३मा गाउका गरीबहरुलाई शीर्षकबाट लेख निकाल्नु भयो .। १९०४ मा ु ु एक पाइला अगाडी दुई पाइला पछाडिु ु भन्ने पुस्तक प्रकाशित गर्नू भयो । उपरोक्त पुस्तकमा मजदुर वर्ग र बन्दै गरेको पार्टीलाइ नष्ट र भ्रष्ट गर्न मेन्सेभिकहरु कसरी लागि परेका छन भन्ने प्रष्ट लेख्नु भएको छ ।
सन १९००मा जर्मनी अनि १९०२मा लन्डनबाट र १९०३मा जेनेभाबाट प्रकाशित इस्क्रा लाइ १९०३मा भएको रसियाली सामाजीक जनबादी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाअधीबेशले पार्टी मुख पत्रको मान्यता प्रदान गर्यो । १९०५अप्रिलमा लन्डनमा रसियाली सामाजिक जनबादी मजदुर पार्टीको तेश्रो महाधिवेशनले लेनिनलाइ पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गर्यो उक्त महाधिवेशनमा मेन्सेभिकहरु उपस्थित हुन नमानेकाले लेनिनले यसलाई दुई महाधिवेशन र दुई पार्टीको संज्ञा दिनु भयो । १९०५नोभेम्बरमा मा लेनिन पिटर्सवर्ग गयर देश भित्रबाटै पार्टी र विद्रोहको नेतृत्व गर्न थाल्नु भयो । १९०५अक्टुबर देखी डिसेम्बरसम्म भयको विद्रोह असफल भए पनि यसलाई लेनिनले मजदुर वर्गको अविस्मरणीय कदम भन्नु भयो । १९०६मा पार्टीको चौथो एकता महाधिवेशनमा भाग लिन लेनिन स्टकहोम जानु भयो । यस महाधिवेशनमा भुमी सम्बन्धी नीतिका विषयमा मेन्सेभिक र बोल्सेभिकका बीचमा घमासान संघर्ष भयो । पार्टी केन्द्रीय समितिमा मेन्सेभिकहरुको बहुमत भयो र पार्टी मुख पत्र पनि मेन्सेभिकहरुले कब्जा गरे । लेनिनले १९११ को वसन्तमा भाबी बोल्सेभिक पार्टी स्कुल र कम्युनिष्ट बिश्वविधालयको जग बसाल्ने गरी पेरिस नजिक लोन्स्युमो बस्तीमा पार्टी स्कुलखोल्नु भयो । जहाँ भूमिगत मजदुर कार्यकर्ताहरुले अध्यन गर्थे १ १९१२ को शरदमा चौथो ड्युमाको चुनाबमा लेनिनको पार्टी बोल्सेभिकले पनि भाग लियो जसमा ६ जना निर्वाचित भए भने मेन्सेभिकहरु ७ जना निर्वाचित भए । प्रथम बिश्वयुध्दको कडा विरोधी लेनिनलाइ झुठो सुचनाको आधारमा जारशाहीको जासुसीको आरोपमा अष्ट्रियाली सरकारले गिरप्तार गर्यो र पछि व्यापक जन दबाब पछि २ हप्तामा रिहाइ गरियो ।
१९१७ फरवरीमा बोल्सेभिक पार्टीको आव्हानमा पेट्रोग्रादमा मजदुरहरुले आमहड्ताल गरे जसमा २लाख भन्दा बढी मजदूरहरुले भाग लिएका थिए । लेनिन झण्डै १० बर्ष पछि निर्वासनबाट ३ अप्रिल १९१७को राति पेट्रोग्राद फर्किनु भयो र लाल झण्डा बोकेका हजारौ मजदुरहरुलाइ बुलेट्प्रुफ मोटर चडेर संबोधन गर्नू भयो । रसमा बुर्जुवा जनवादी क्रान्ति पछि बनेको बुर्जुवाहरुको अस्थाइ क्रान्तिकारी सरकारलाइ लेनिनले असहयोग गर्न आव्हान गर्दै सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरुलाई भन्ने नारा अगाडी सार्नु भयो । जारशाहीका गुण्डाद्वारा १९१७ जुलाई ५ को राति प्राभ्दाको कार्यालयमा आक्रमण गरे लेनिन बाँच्न सफल हुनु भयो । लेनिनलाइ गिरफ्तार गर्न मद्दत गर्नेलाइ अस्थाई सरकारको अध्यक्ष केरेन्स्कीले थुप्रै पैसा इनाम दिने घोषणा गर्यो तर लेनिन भने पेट्रोग्राद नजिकको राजलिफ तलाउको किनाराको एक छाप्रोमा फिनल्याण्ड निवासी घासीको रुपमा भूमिगत ढंगले काम गर्न थाल्नु भयो । त्यही क्रममा राज्य र क्रान्ति पुस्तक लेख्नु भयो ।
१९१७ जुलाईको अन्त्यमा पेट्रोग्रादमा पार्टीको छैठौं महाधिबेशन अर्धभुमिगत ढंगले लेनिनलाइ अध्यक्षमा चुन्दै सम्पन्न भयो । १६अक्टोबर १९१७मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाइ संम्बोधन गर्दै तुरुन्त शसस्त्र विद्रोहमा सुरु गर्न आह्वान गर्नु भयो , अक्टुबर २५ को बिहानीपख टेलिफोन, टेलिग्राफ, रेडियो स्टेसनहरु रेल स्टेसनहरु, नेभा नदीका पुलहरु र राजधानीका मुख्य अड्डाहरुमा विद्रोही सिपाही, नौसैनिक र मजदुरहरुले कब्जा गरे । त्यसै दिन २ बजेर ३० मिनेटमा पेट्रोग्राद सोभियतको ऐतिहासिक बैठक सुरु भयो त्यहाँ लेनिनले समाजवादी क्रान्तिको विजयका बारेमा लेनिनले निकै जोशिलोभाषण गर्नु भयो । सोभियतहरुको दोश्रो महाअधिबेशनले सोभियतहरुको एक अखिल रसियाली केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति छान्यो र कमिसार परिषद (मन्त्रिमण्डल ) को अध्यक्षमा लेनिन चुनिनु भयो ।
६मार्च १९१८मा पेट्रोग्रादमा पार्टीको सातौ महादीबेशन भयो । पार्टीको नाम रसीयाली कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक)राखियो । जुलाई १९१८मा सोभियतहरुको पाचौ महाधिबेशनले रुसी गणतन्त्रको संविधान स्विकार गर्यो । १९१८ अगस्त ३० मा लेनिनमाथि एसेर पार्टी की सदस्य काप्लानले विषाक्त गोली प्राहार गर्दा उहाँ गम्भीर घाइते हुनु भयो ।
लेनिनको सक्रियतामा १९१९ मार्चमा मास्कोमा तृतीय अन्तराष्ट्रिय गठन भयो र प्रथम महाधिबेशनको नेतृत्व समेत लेनिनले गर्नु भयो । १९२०को मध्य देखि लेनिन बिरामी पर्नु भयो । १९२२ मा लेनिन पूरै बिरामी हुनुभयो । १९२२मे मा आयोजित पार्टी महाधिवेशनमा लेनिनले पार्टीको महासचिब त्याग्ने घोषणा गर्नु भयो । २५ मे १९२२ मा लेनिनलाइ पक्षघात भयो । करिब ६ महिना बिरामी पर्नु उपचार पछि अलि विशेक भयो र रुसी समाजबाद र पार्टी भित्र देखिएका समस्याहरु हल गर्न कोसिस गर्दा गर्दै उहाँलाइ फेरि पक्षघात भयो र २३ जनवरी १९२४ का दिन बेलुकी ६ः ३०बजे देहावसान भयो । लेनिनको शव गोर्कीबाट मस्को ल्याई संघीय भबनको स्तम्भ हलमा ४ दिन सम्म रुसी मजदुर किसानहरुले आफ्ना महान नेता लेनिनलाइ श्रदान्जली दिए । जनवरी २७ को दिउँसो अन्त्यष्टि जुलुस निस्कियो र लेनिनको सब कफन लालमैदानमा विशेष रूपले निर्माण गरेको समाधिमा राखियो ।
लेनिनले आफ्नो समग्र जीबन रुसी किसान मजदुर श्रमजीबी बर्गका मुक्ति अनि रुसी कम्यनिष्ट आन्दोलन र बिश्वकम्यनिष्ट आन्दोलनका लागि खर्चिनु भयो । बिश्वका अनेक मुलुकहरुमा लेनिनको शिक्षालाइ ग्रहण गर्दै समाजवादी क्रान्तिहरु सम्पन्न गरिए । लेनिनले मार्क्सबादी विज्ञानको प्रयोग मात्र होइन विकास पनि गर्नु भयो । त्यसैले यो आज मानव मुक्तिको कलाको रुपमा स्थापित भएको छ । लेनिनले क्रान्तिकारी सिद्दान्त र क्रान्तिकारी पद्दतिलाइ विशेष रुपमा प्रतिपादित गर्नु भयो र आज लेनिनवादी संगठनात्मक सिदान्तका रुपमा संसारभरिका क्रान्तिकारीमाझ निकै लोकप्रिय छ। आजको यो युगमा पनि जनवादी समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न र साम्राज्यबादसँग लड्नका लागि लेनिनबादका शिक्षाहरु निकै नै महत्वपुर्ण छन । त्यसैले यो १५० औ. लेनिन जयन्तीको अवसरमा उहाले निर्देशित गरेको पथमा अगाडि बढ़ने प्रण गरौ । महान लेनिन प्रति उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रदान्जली ….
मिति २०७७ बैशाख १० गते
मुख्यमन्त्री पोखरेलद्धारा मजदुर दिवसको शुभकामना
दे.ज.मो.अभियानटोलीद्धारा बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन , सरकार…